October 4, 2021 – Shwe Myanmar
ဒူးရငျးသီး စားသောသူမြား သတိပွုရနျ ….
အသွားမတော်တစ်လှမ်း အစားမတော်တစ်လုတ်’ ဆိုတဲ့စကားပုံဟာ အစားအသောက် စားသုံးရာမှာ အခန့်မသင့်ရင် ဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရာသီစာဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာ အစားမတတ်ရင်ဘေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒူးရင်းသီးဆိုတာက အသီးတကာတို့ရဲ့ဘုရင်လို့တင်စားရလောက်အောင် အနံ့အရသာ ပြည့်စုံရုံမျှမက အားအင်ဖြစ်စေနိုင်သော သစ်သီးတစ်မျိုးလ
ည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံ တို့မှနေပြီးအများဆုံးထွက်ရှိကာ လူကြိုက်များသော သစ်သီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒူးရင်းသီးဟာ စားတတ်ရင်အားအင်ဖြစ်ထွန်းသလို မစားတတ်ရင် မြွေထက်တောင် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အသီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒူးရင်းသီးကို စားသုံးပြီး ၈-နာရီအတွင်း နို့ထွက်အစားအသောက်များကို မစားသုံးဖို့
တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင် ဒူးရင်းသီးနှင့်အတူ တွဲဖက်မစားသင့်တဲ့ အစားအသောက်များကတော့ အရက်၊ ကိုကာကိုလာ နှင့် လိုင်ချီးသီးများဖြစ်ပြီး စားသုံးမိပါက အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ?ဗဟုသုတ ရအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဒူးရင်းသီးနှင့်အရက်တွဲဖက်မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နှစ်ခုစလုံး အပူစာတွေဖြစ်တာကြောင့် သာမန်လူများသာမက သွေးတိုးနှင့် ဆီးချိုရှိသူများဆိုရင် ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောပေါက်ခြင်း၊ သွေးကြောများရုတ်တရက် ပေါက်ခြင်း နှင့် လေဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တွဲဖက်စားသုံးခြင်း မပြုဖို့တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
၂။ အပူများတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းရှိသူများ၊ လည်ချောင်းနာချောင်းဆိုးသူများ၊ ဖျားနာသူများ၊ လေပြွန်ရောင်ရောဂါရှိသူများအနေဖြင့် ဒူးရင်းသီးစားသုံးပါက ရောဂါ အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားတတ်တာကြောင့် မစားသုံးသင့်ပါဘူး။
၃။ ဒူးရင်းသီးစားသုံးခြင်းဟာ အပူများတတ်ခြင်းကြောင့် ဒူးရင်းသီးစားပြီးပါက ပဲစိမ်းသာကူကျိူ ကို ဝမ်းအေးစေရေန်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ ဒူးရင်းသီးမှာ အပူဓာတ်နှင့် သကြားဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာမို့ အဝလွန်ရောဂါရှိသူများ နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်များသူများ စားသုံးရန်မသင့်ပါဘူး။
၅။ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်အလွန်မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့် နာတာရှည် ကျောက်ကပ် မကောင်းသူများ နှင့် နှလုံးရောဂါရှိသူများအတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။
၆။ ဒူးရင်းသီးကိုတစ်ကြိမ်စားတိုင်း အများအပြားမစားသုံးသင့်သည့်အပြင် ဒူရင်းသီးအနံ့မှာ အရက်နံ့ထွက်နေပြီဆိုရင်လည်း စားသုံးဖို့မသင့်တော့ပါဘူး။
၇။ ဒူးရင်းသီးထိပ်ပွင့်နေရင် အကြာကြီးထားရန်မသင့်သည့်အပြင် အနံ့လည်း ပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် မဝယ်ယူသင့်ပါဘူး။၈။ ဒူးရင်းသီး စားသုံးပြီးချိန်မှာ ရေအမြောက်အများသောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ဒူးရင်းသီးအတွင်း အာဟာရဓာတ်အ
လွန်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အမြောက်အများ စားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေရုံသာမက ဝမ်းချုပ်နိုင်တာကြောင့် ထိန်းသိမ်း စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးအမြောက်အများစားသုံးမိပါက မင်းကွတ်သီးစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် အပူဓာတ်ကိုလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒုးရင်းသီး ကြိုက်နှစ်သက်ကြသော မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ ဆင်ခြင်စားသောက်နိုင်ဖို့ အန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းအကျိုးငှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။Credit
“သမီးဒီနှဈပွနျလာရငျ လူထှကျတော့မယျ အဖအေမရေယျ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆရာလေးရယျလို့ မေးလိုကျတော့”
လူထွက်တော့မယ် အဖေရယ် အမေရယ် ကလင် ကလင် ဖုန်းခေါ်သံလေးကြားပြီးကိုင်လိုက်တော့ ဟဲလိုသမီးလား ဟုတ်တယ်အမေ သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေအမေ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် အေးပါကွယ် အမေ့ဆီသီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးတော့ပြန်ခဲ့ပါကွယ်။ဒေါ်တင်မေ တစ်ယောက်အတွေးများစွာနှင့်နေပြီးစဉ်းစားနေတော့တယ်။
မွေးထားတဲ့သားသမီး ၃ယောက်ထဲမှာသမီးသီလရှင်လေးကအကြီးဆုံး သားလေးနှစ်ယောက်နှင့် အတူတကွနေတာပေါ့ သမီးလေးကို ၁၀ နှစ်အရွယ်တည်းကသီလရှင်ဝတ်ပေးခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းမှာဘုရားစာပါဠိတွေကိုသင်ယူစေခဲ့တယ်။
သမီးလေးအဖေက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အလုပ်သွားလုပ်ပီး မိခင်တစ်ယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာကို သနားလို့ထင်ပါတယ် သမီးကဒီနှစ်မှလူထွက်မယ် စကားကိုပြောတော့
ဒေါ်တင်မေခင်များမှာ ငိုရမလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။သမီးလေးကို တော့ချော့ပြောလိုက်တာဘဲရွာကိုအရောက်တော့ပြန်ခဲ့အုံးလို့ မှာလိုက်တာဘဲ ဘုရား ဘုရားသမီးလေး
သီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးနှင့်ဘဲပြန်ခဲ့ပါစေ ဘုရားဆိုပြီးဘုရားရှေ့မှာဆု တောင်းနေပြီးလေ….။ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေချိန်မှာ ဒေါ်တင်မေထံ သမီးလေးသီလရှင်ပြန်လာမယ့်သတင်း ကြားတော့
ရွာလယ်ပိုင်းကသူဋ္ဌေးတစ်ဦးဆီမှာ ပိုက်ဆံ ၂ သိန်းလောက်သွားချေးပြီး သမီးလေးအတွက် SAMSUNG ဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်ထားလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ကူးကတော့သမီးလေးကို ဒီဖုန်းလေးနှင့်ချော့ပြီးလူမထွက်အောင်တားမယ်ပေါ့…။
ဟော…… သမီးလေးကရောက်လာပြီးအမေ……အမေ ရေလို့အော်ခေါ်ပြေးဖက်ထားပြီးသားမိနှစ်ယောက်အပြိုင်ငိုနေကြပြီး။ဒေါ်တင်မေက သမီးလေးမျက်နှာမှမျက်ရည်တွေကိုလက်လေးနှင့် သုတ်ပေးပြီး
ငါ့သမီးလေး အရမ်းပိန် သွားပါလား ကွယ် သမီးရယ် စိတ်တွေဘယ်လောက်ဆင်းရဲနေလို့ဟင်း အမေ့ကိုပြောပြပါကွယ်…။အမေရယ်သမီးလူထွက်ချင်တာ အမေ့ကိုသနားလို့ပါ။
အမေမောင်လေးနှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ထဲလုပ်ကြွေးနေတော့ သမီးမကြည့်ရက် လို့ပါအမေ။သမီးရယ် အမေ့ကိုထည့်မတွက် ပါနဲ့ သမီးလေးအဆင်ပြေဖို့ ကအဓိကပါ အမေကဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
ကဲ ကဲ သမီးလေးအမေ့တွက်ဆို လူတော့မထွက်ပါနဲ့နော်အမေရယ် သမီးလေးသီလရှင်ဘဝကိုမြတ်နိုးပါတယ် ဒါပေမဲ့လေ အရာရာမှာနိမ့်ကျလွန်းပြီး ဘေးဖယ်ထားတဲ့ သမီးတို့ဘဝကို ကြာလာ တော့စိတ်ပျက်မိတယ်အမေ…။
သမီးတို့မှာ ဘုန်းကြီး တွေကိုရင်တွေလို ဆွမ်းခံစားရတာမဟုတ်ဘဲ အဖိတ်နေ့ ဥပုသ်နေ့လေးတွေမှာ အရပ်တကာ မြို့တကာလှည့်ပြီး နေပူခံမိုးရွာမိ တစ်အိမ်ဝင်တစ်အိမ်ထွက်ဆန်လေးတွေလိုက်အလှူ ခံရတာပါအမေ…။
တစ်အိမ်မှာ ဆန်တစ်ဇွန်း လောက်ဘဲရပြီး တစ်ရပ်ကွက်လုံးမှဆန်လေး ၃ ပြည်လောက်ရ အဲဒီဆန်တွေကို ဈေးဆိုင်မှပြန်ရောင်း ရတဲ့ငွေလေးတွေနှင့်သမီးတို့၏အာဟာရအတွက် ချက်ပြုတ်စားရတာပါအမေ…။
တစ်ချိူ့ဒကာတွေကပြောသေးတယ်အမေ ဒါနဆန်များပါရှင်လို့အလှူ ခံရင် နင်တို့လုပ်စားရှိလို့လား နင်တို့လင်အိမ်တွေမို့လားဆိုပြီး အပြောခံရတယ်အမေ
သူတို့လောင်းတာကနည်းနည်း ပြောခံရတာတွေများလာတော့ ပုထု ဇဉ်ဆိုတဲ့သမီးတို့နှလုံးသားတွေကကြာကြာမခံနိုင်တော့ဘူးအမေ…
ဒီခေတ်ကြီးမှာ တိုးတက် လာတာနှင့် အမျှ မိန်းကလေး အသုံး အဆောင်တွေကလည် လိုချင်စရာတွေပါဘဲ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ထိန်းငါဟာဘုရားသမီးတော်စစ်စစ် ဒါတွေနှင့်
ငါကဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးအံကိုကြိတ်ပြီးစိတ်ကိုနိုင်ထိန်းထားခဲ့တယ်အမေ…တစ်ခါတစ်လေမှာလေ ဘိက္ခုနီသာသနာ သီလရှင်သာသနာစခဲ့တဲ့ မိထွေတော်ဂေါတမီတို့
ယသော်ဓရာတို့ကိုအပြစ်တင်ချင်မိတယ်အမေ သူတို့ကဘုရားခွင့်မပြုခဲ့တာတောင် ဘိက္ခုနီသာသနာကိုရအောင်ဝင်ခဲ့တယ်….သူတို့အဲဒီလိုဝင်ခဲ့လိုသမီးတို့သီလရှင်တွေ
အခုလိုဝတ်နေရတာလို့အပြစ်မြင်မိတယ်အမေ ဒါတောင်တစ်ချိူ့ယောကျာင်္းတွေက သီလရှင်တွေကိုကန့်တော့ရင်ဘုန်းနိမ့်တယ်ထင်လား မသိဘူးအမေ
သမီးတို့ဆိုယောကျာင်္းတွေမရှိခိုးဘူး ရှိခိုးခံချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမေအနှိမ်ခံရလို့ပါ…။ရဟန်းတွေ ကိုရင်တွေဆိုလှူ မယ့်လူ ရဟန်းခံမယ် ရဟန်းဒကာတွေပေါမှပေါအမေ
သမီးတို့ ဆရာလေးတွေ အသက် ၂ဝ ပြည့်လို့လဲဘယ်သူမှရဟန်း ဒကာလာမခံပါဘူးအမေ….။ကိုယ်ကျက်မယ့်စာအုပ်ကို ကိုယ့်ဘာ သာကိုယ်ဝယ် ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လျှောက်လမ်းရတဲ့ခရီးတွေ ကြာလာတော့ပြိုလဲချင်နေပြီးအမေ
ပြီးတော့အမေ ကျောင်းတွေမှာနေဖို့စားရိတ်ကိုလည်း ကျောင်းထိုင်ဆရာကြီးတွေကိုပေးရတယ်အမေ…။သူတို့ကိုလည်အပြစ်မမြင်ပါဘူး ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကကြီး ရေဖိုး မီးဖိုးတွေနှင့်
အပြင်ကကျောင်းသားတွေတက်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ဘာမှမပြောပါးပေမယ့် ဘယ်သူကမှ မလှူ တဲ့သမီးတို့ ဘဝမှာတော့ ငွေတစ်သိန်းဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါးပါတယ်လအမေ့ကိုလည်းဒီထက်ဒု က္ခ မပေးချင်တော့ဘူး
ဒါကြောင့်သမီးကို လူထွက်ခွင့်ပေးပါနော် သမီးလေးက သူပြောချင်တာတွေပြောတာကိုနားထောင်ပြီး ရော့ ဒါသမီးအတွက်အမေဝယ်ပေးတာဖုန်းလေးကိုထုတ်ပေးတော့ သမီးလေးကဝမ်းသာသလိုရှိပေမဲ့ မျက်ရည်တွေကျလာတယ်…။
အမေရယ် အမေ့မှာပိုက်ဆံမရှိဘဲ ဒီဖုန်းကိုဘာလို့ ဝယ်တာလဲအမေ သမီးနှင့်အမေဖုန်းပြောရအောင်ပေါ့ကွယ် ပြီးတော့သမီးလည်တရားတွေနား ဗဟုသုတတွေလည်ရှာလို့ရတာပေါ့ကွယ်…
သမီးရယ်ယူပါသမီးလူမထွက်ရင်အမေဘာဘဲ လုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရ ဘာမှမဖြစ်ဘူး သမီးလေးလူမထွက်ဖို့သာအဓိကပါ သမီးတို့အခက်အခဲတွေကိုနားလည်ပါတယ်သမီးရယ်
သမီးတို့မှာဒီသီလရှင်သာသနာကိုမထမ်းရင်ရှေ့ကထမ်းဆောင်သွားတဲ့ အမျိူးသမီးအရိယာကြီးတွေကိုအားနာတယ်သမီး အမေတို့မိန်းမသာသနာဆိုလို့ ဒီသီလရှင်သာသနာတစ်ခုဘဲရှိတယ်သမီး။
အရေအတွက်ကိုလည်ကြည့်အုံးသမီး သံဃာတွေ သိန်းချီပြီး ရှိနေပေမယ့်အမျိူးသမီးသာသနာပြုတွေကသောင်းဂဏန်းဘဲရှိတယ်သမီး ကျေးဇူးပြု ပြီးထမ်းဆောင်ပေးပါသမီးရယ်….
အမေတို့မိန်းမသားတွေအတွက်ဂုဏ်ယူရတဲ့ ဘုရားသာသနာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ပေးပါသမီးရယ် သမီးလေးလည် ဒေါ်တင်မေဆုံးမချက်တွေ နားထောင်ပြီးစစ်ကိုင်းကိုပြန်စာတွေသင်ပြီး
ဓမ္မာစရိယထိပြီးအောင်နေသွားခဲ့တယ် ဆရာလေးအမည်ကတော့ မပညာနန္ဒတဲ့ သာသနာပြုနေသောအစ်မတော် ညီတော်များ၏ဘဝတွေကို ဤစာဖြင့်ရေးသားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
မိန်းမဘဝရပေမဲ့ရလာတဲ့လူဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲ ရဟန်းသံဃာများနှင့်တန်းတူသာသနာပြုနေတဲ့အတွက်အစဉ်လေးစားနေပါသည်။ သီလရှင်လေးများကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ…။
လူထှကျတော့မယျ အဖရေယျ အမရေယျ ကလငျ ကလငျ ဖုနျးချေါသံလေးကွားပွီးကိုငျလိုကျတော့ ဟဲလိုသမီးလား ဟုတျတယျအမေ သမီးဒီနှဈပွနျလာရငျ လူထှကျတော့မယျ အဖအေမေ
ဘာဖွဈလို့လဲဆရာလေးရယျ အေးပါကှယျ အမဆေီ့သီလရှငျဝတျရဲ့လေးတော့ပွနျခဲ့ပါကှယျ။ဒျေါတငျမေ တဈယောကျအတှေးမြားစှာနှငျ့နပွေီးစဉျးစားနတေော့တယျ။
မှေးထားတဲ့သားသမီး ၃ယောကျထဲမှာသမီးသီလရှငျလေးကအကွီးဆုံး သားလေးနှဈယောကျနှငျ့ အတူတကှနတောပေါ့ သမီးလေးကို ၁၀ နှဈအရှယျတညျးကသီလရှငျဝတျပေးခဲ့ပွီး စဈကိုငျးမှာဘုရားစာပါဠိတှကေိုသငျယူစခေဲ့တယျ။
သမီးလေးအဖကေ ငယျငယျရှယျရှယျနှငျ့ အလုပျသှားလုပျပီး မိခငျတဈယောကျတညျးရုနျးကနျနရေတာကို သနားလို့ထငျပါတယျ သမီးကဒီနှဈမှလူထှကျမယျ စကားကိုပွောတော့
ဒျေါတငျမခေငျမြားမှာ ငိုရမလို ဖွဈနခေဲ့တယျ။သမီးလေးကို တော့ခြော့ပွောလိုကျတာဘဲရှာကိုအရောကျတော့ပွနျခဲ့အုံးလို့ မှာလိုကျတာဘဲ ဘုရား ဘုရားသမီးလေး
သီလရှငျဝတျရဲ့လေးနှငျ့ဘဲပွနျခဲ့ပါစေ ဘုရားဆိုပွီးဘုရားရှမှေ့ာဆု တောငျးနပွေီးလေ….။ရှကျဟောငျးတှကွှေေ ရှကျသဈတှဝေခြေိနျမှာ ဒျေါတငျမထေံ သမီးလေးသီလရှငျပွနျလာမယျ့သတငျး ကွားတော့
ရှာလယျပိုငျးကသူဋ်ဌေးတဈဦးဆီမှာ ပိုကျဆံ ၂ သိနျးလောကျသှားခြေးပွီး သမီးလေးအတှကျ SAMSUNG ဖုနျးလေးတဈလုံးဝယျထားလိုကျတယျ။သူ့စိတျကူးကတော့သမီးလေးကို ဒီဖုနျးလေးနှငျ့ခြော့ပွီးလူမထှကျအောငျတားမယျပေါ့…။
ဟော…… သမီးလေးကရောကျလာပွီးအမေ……အမေ ရလေို့အျောချေါပွေးဖကျထားပွီးသားမိနှဈယောကျအပွိုငျငိုနကွေပွီး။ဒျေါတငျမကေ သမီးလေးမကျြနှာမှမကျြရညျတှကေိုလကျလေးနှငျ့ သုတျပေးပွီး
ငါ့သမီးလေး အရမျးပိနျ သှားပါလား ကှယျ သမီးရယျ စိတျတှဘေယျလောကျဆငျးရဲနလေို့ဟငျး အမကေို့ပွောပွပါကှယျ…။အမရေယျသမီးလူထှကျခငျြတာ အမကေို့သနားလို့ပါ။
အမမေောငျလေးနှဈယောကျကို တဈယောကျထဲလုပျကွှေးနတေော့ သမီးမကွညျ့ရကျ လို့ပါအမေ။သမီးရယျ အမကေို့ထညျ့မတှကျ ပါနဲ့ သမီးလေးအဆငျပွဖေို့ ကအဓိကပါ အမကေဘာမှ မဖွဈဘူး။
ကဲ ကဲ သမီးလေးအမတှေ့ကျဆို လူတော့မထှကျပါနဲ့နျောအမရေယျ သမီးလေးသီလရှငျဘဝကိုမွတျနိုးပါတယျ ဒါပမေဲ့လေ အရာရာမှာနိမျ့ကလြှနျးပွီး ဘေးဖယျထားတဲ့ သမီးတို့ဘဝကို ကွာလာ တော့စိတျပကျြမိတယျအမေ…။
သမီးတို့မှာ ဘုနျးကွီး တှကေိုရငျတှလေို ဆှမျးခံစားရတာမဟုတျဘဲ အဖိတျနေ့ ဥပုသျနလေ့ေးတှမှော အရပျတကာ မွို့တကာလှညျ့ပွီး နပေူခံမိုးရှာမိ တဈအိမျဝငျတဈအိမျထှကျဆနျလေးတှလေိုကျအလှူ ခံရတာပါအမေ…။
တဈအိမျမှာ ဆနျတဈဇှနျး လောကျဘဲရပွီး တဈရပျကှကျလုံးမှဆနျလေး ၃ ပွညျလောကျရ အဲဒီဆနျတှကေို စြေးဆိုငျမှပွနျရောငျး ရတဲ့ငှလေေးတှနှေငျ့သမီးတို့၏အာဟာရအတှကျ ခကျြပွုတျစားရတာပါအမေ…။
တဈခြိူ့ဒကာတှကေပွောသေးတယျအမေ ဒါနဆနျမြားပါရှငျလို့အလှူ ခံရငျ နငျတို့လုပျစားရှိလို့လား နငျတို့လငျအိမျတှမေို့လားဆိုပွီး အပွောခံရတယျအမေ
သူတို့လောငျးတာကနညျးနညျး ပွောခံရတာတှမြေားလာတော့ ပုထု ဇဉျဆိုတဲ့သမီးတို့နှလုံးသားတှကေကွာကွာမခံနိုငျတော့ဘူးအမေ…
ဒီခတျေကွီးမှာ တိုးတကျ လာတာနှငျ့ အမြှ မိနျးကလေး အသုံး အဆောငျတှကေလညျ လိုခငျြစရာတှပေါဘဲ ဒါပမေဲ့ကိုယျ့စိတျကိုပွနျထိနျးငါဟာဘုရားသမီးတျောစဈစဈ ဒါတှနှေငျ့
ငါကဘာမှမဆိုငျဘူးဆိုပွီးအံကိုကွိတျပွီးစိတျကိုနိုငျထိနျးထားခဲ့တယျအမေ…တဈခါတဈလမှောလေ ဘိက်ခုနီသာသနာ သီလရှငျသာသနာစခဲ့တဲ့ မိထှတေျောဂေါတမီတို့
ယသျောဓရာတို့ကိုအပွဈတငျခငျြမိတယျအမေ သူတို့ကဘုရားခှငျ့မပွုခဲ့တာတောငျ ဘိက်ခုနီသာသနာကိုရအောငျဝငျခဲ့တယျ….သူတို့အဲဒီလိုဝငျခဲ့လိုသမီးတို့သီလရှငျတှေ
အခုလိုဝတျနရေတာလို့အပွဈမွငျမိတယျအမေ ဒါတောငျတဈခြိူ့ယောကြာင်ျးတှကေ သီလရှငျတှကေိုကနျ့တော့ရငျဘုနျးနိမျ့တယျထငျလား မသိဘူးအမေ
သမီးတို့ဆိုယောကြာင်ျးတှမေရှိခိုးဘူး ရှိခိုးခံခငျြလို့ပွောတာမဟုတျပါဘူးအမအေနှိမျခံရလို့ပါ…။ရဟနျးတှေ ကိုရငျတှဆေိုလှူ မယျ့လူ ရဟနျးခံမယျ ရဟနျးဒကာတှပေေါမှပေါအမေ
သမီးတို့ ဆရာလေးတှေ အသကျ ၂ဝ ပွညျ့လို့လဲဘယျသူမှရဟနျး ဒကာလာမခံပါဘူးအမေ….။ကိုယျကကျြမယျ့စာအုပျကို ကိုယျ့ဘာ သာကိုယျဝယျ ကိုယျ့ဘဝကိုယျလြှောကျလမျးရတဲ့ခရီးတှေ ကွာလာတော့ပွိုလဲခငျြနပွေီးအမေ
ပွီးတော့အမေ ကြောငျးတှမှောနဖေို့စားရိတျကိုလညျး ကြောငျးထိုငျဆရာကွီးတှကေိုပေးရတယျအမေ…။သူတို့ကိုလညျအပွဈမမွငျပါဘူး ဒီဘကျခတျေမှာ ကုနျစြေးနှုနျးတှကေကွီး ရဖေိုး မီးဖိုးတှနှေငျ့
အပွငျကကြောငျးသားတှတေကျတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ဘာမှမပွောပါးပမေယျ့ ဘယျသူကမှ မလှူ တဲ့သမီးတို့ ဘဝမှာတော့ ငှတေဈသိနျးဆိုတာအငျမတနျမှရှားပါးပါတယျလအမကေို့လညျးဒီထကျဒု က်ခ မပေးခငျြတော့ဘူး
ဒါကွောငျ့သမီးကို လူထှကျခှငျ့ပေးပါနျော သမီးလေးက သူပွောခငျြတာတှပွေောတာကိုနားထောငျပွီး ရော့ ဒါသမီးအတှကျအမဝေယျပေးတာဖုနျးလေးကိုထုတျပေးတော့ သမီးလေးကဝမျးသာသလိုရှိပမေဲ့ မကျြရညျတှကေလြာတယျ…။
အမရေယျ အမမှေ့ာပိုကျဆံမရှိဘဲ ဒီဖုနျးကိုဘာလို့ ဝယျတာလဲအမေ သမီးနှငျ့အမဖေုနျးပွောရအောငျပေါ့ကှယျ ပွီးတော့သမီးလညျတရားတှနေား ဗဟုသုတတှလေညျရှာလို့ရတာပေါ့ကှယျ…
သမီးရယျယူပါသမီးလူမထှကျရငျအမဘောဘဲ လုပျပေးရ လုပျပေးရ ဘာမှမဖွဈဘူး သမီးလေးလူမထှကျဖို့သာအဓိကပါ သမီးတို့အခကျအခဲတှကေိုနားလညျပါတယျသမီးရယျ
သမီးတို့မှာဒီသီလရှငျသာသနာကိုမထမျးရငျရှကေ့ထမျးဆောငျသှားတဲ့ အမြိူးသမီးအရိယာကွီးတှကေိုအားနာတယျသမီး အမတေို့မိနျးမသာသနာဆိုလို့ ဒီသီလရှငျသာသနာတဈခုဘဲရှိတယျသမီး။
အရအေတှကျကိုလညျကွညျ့အုံးသမီး သံဃာတှေ သိနျးခြီပွီး ရှိနပေမေယျ့အမြိူးသမီးသာသနာပွုတှကေသောငျးဂဏနျးဘဲရှိတယျသမီး ကြေးဇူးပွု ပွီးထမျးဆောငျပေးပါသမီးရယျ….
အမတေို့မိနျးမသားတှအေတှကျဂုဏျယူရတဲ့ ဘုရားသာသနာအဖွဈထမျးဆောငျပေးပါသမီးရယျ သမီးလေးလညျ ဒျေါတငျမဆေုံးမခကျြတှေ နားထောငျပွီးစဈကိုငျးကိုပွနျစာတှသေငျပွီး
ဓမ်မာစရိယထိပွီးအောငျနသှေားခဲ့တယျ ဆရာလေးအမညျကတော့ မပညာနန်ဒတဲ့ သာသနာပွုနသေောအဈမတျော ညီတျောမြား၏ဘဝတှကေို ဤစာဖွငျ့ရေးသားဂုဏျပွုလိုကျပါသညျ။
မိနျးမဘဝရပမေဲ့ရလာတဲ့လူဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲ ရဟနျးသံဃာမြားနှငျ့တနျးတူသာသနာပွုနတေဲ့အတှကျအစဉျလေးစားနပေါသညျ။ သီလရှငျလေးမြားကိုတနျဖိုးထားနိုငျကွပါစေ…။
“ပိုကျဆံက သခငျရှိတယျ ပိုကျဆံမှာ ကြိနျစာရှိတယျ ငှမေမွဲတဲ့သူတှေ ဒီစာကိုဖတျကွညျ့ပါ”
အခက်ခဲဆိုတာ လူ့ဘဝ သက်တမ်း ကြုံနေမှာမခက်ခဲဖူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူ
အနည်းနဲ့ အမျာကြုံကြမယ်ပိုက်ဆံကို ကတိပျက်အောင် လုပ်ရင်
ပိုက်ဆံကို ကတ်စေးနည်း ချွေးကုတ်ပြီး စုနေမှ မြဲနေတာ မဟုတ်ပါဘူး
ကတိ တည်တည်နဲ့ ပေးစရာရှိပေး ယူစရာရှိယူပါ
ပိုက်ဆံ ကို ပြန်မဆပ်ချင်တဲ့ သူတွေဆီမှာငွေမမြဲပါဘူး ။
လက်ခက်သူတွေ ကျင့်ကြံ ကြည့်ပါ ။
ပိုကျဆံက သခငျရှိတယျ ပိုကျဆံမှာ ကြိနျစာရှိတယျ
အခကျခဲဆိုတာ လူ့ဘဝ သကျတမျး ကွုံနမှောမခကျခဲဖူးဆိုတဲ့လူမရှိပါဘူ
အနညျးနဲ့ အမြာကွုံကွမယျပိုကျဆံကို ကတိပကျြအောငျ လုပျရငျ
ပိုကျဆံကို ကတျစေးနညျး ခြှေးကုတျပွီး စုနမှေ မွဲနတော မဟုတျပါဘူး
ကတိ တညျတညျနဲ့ ပေးစရာရှိပေး ယူစရာရှိယူပါ
ပိုကျဆံ ကို ပွနျမဆပျခငျြတဲ့ သူတှဆေီမှာငှမေမွဲပါဘူး ။
လကျခကျသူတှေ ကငျြ့ကွံ ကွညျ့ပါ ။